धरानको बीपी प्रतिष्ठानमा 'लफडा'::Hamro Koshi Awaj / awaz
धरानको बीपी प्रतिष्ठानमा ‘लफडा’
धरानको बीपी प्रतिष्ठानका उपकुलपतिले रक्सी खाएको भन्दै नाराबाजी र घेराउ (तस्वीर र भिडियोसहित)
धरानः धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले मादक पदार्थ सेवन गरेको भन्दै नाराबाजी र उपकुलपति कार्यालय घेराउ गरिएको छ ।
प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सक, कर्मचारी र विद्यार्थीले नाराबाजी गर्दै कार्यालय घेराउ गरेका हुन् । उनीहरुले उपकुलपतिको डा. गिरीको मापसे जाँच हुनुपर्ने भन्दै नाराबाजी गरेका हुन् । नाराबाजी भइरहँदा व्यापक मात्रामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो ।
रक्सी पिएको अवस्थामा भेटिएपछि अस्पताल अहिले तनावग्रस्त बनेको छ । संयुक्त संघर्ष समितिका सहसंयोजक डा.विष्णु पोखरेलले आज ३ बजे वार्तामा बोलाइएको तर डा. गिरीले मादक पदार्थ (रक्सी) खाएको जस्तो गरेर बोल्न थालेपछि लफडा भएको बताए ।
वार्तामा बोलाएर रक्सी पिएर उपकुलपति आएको र अन्य पदाधिकारीहरु रमिते बनेको भन्दै आन्दोलनरत चिकित्सक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीहरु आक्रोशित भएका थिए । उनीहरुले उपकुलपतिसहित वार्तामा सहभागी अन्य पदाधिकारीहरुलाई वार्तास्थलबाट निस्कन दिएका थिएनन् । उपकुलपतिलाई सेक्युरिटी कम्पनी भिआइपीको गाडीमा भगाउन लाग्दा पनि आन्दोलनकारीहरुले रोकेका थिए । संघर्ष समितिका पदाधिकारीले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई कोठामा थुनेका थिए ।
वार्तामा रेक्टर डा.गुरुप्रसाद खनाल, रजिष्ट्रार डा.मोहनचन्द्र रेग्मी, अस्पताल डेपुटी उपनिर्देशक डा.दिव्यराज मिश्र, सहायक अस्पताल निर्देशक डा.प्रमोद बराल सहभागी थिए । अहिले पनि पदाधिकारीको राजीनामा माग्दै नाराबाजी भइरहेको छ । ‘भिसी डा. ज्ञानेन्द्र मदिरामा लठिएको पायौं’, आन्दोलनरत डा. पोखरेलले भने, ‘मापसे चेक नगरी बाहिर निस्कन नदिने भनेर उहाँलाई वार्तास्थलमै रोकेर राखेका छौं ।’ प्रतिष्ठान सुधारको माग राखेर धरानका सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र प्रतिष्ठानका चिकित्सक कर्मचारीले आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
यो समाचार तयार पार्दासम्म डा. गिरीले मादक पदार्थ सेवन गरेको हो होइन भन्नेबारेमा रिपोर्ट आइसकेको छैन ।